Inaad ka nasatid caruurtaada Darbi jiif ma uga Tagi laheyd!Qiso dhab oo ka Dhacdey Ukraine – Beegsonews-Wararka maanta
Home XOGAHA DUNIDA Inaad ka nasatid caruurtaada Darbi jiif ma uga Tagi laheyd!Qiso dhab oo...
Inaad ka nasatid caruurtaada Darbi jiif ma uga Tagi laheyd!Qiso dhab oo ka Dhacdey Ukraine
haqan bani’aadamnimada ka baxsan, lamaane is-qaba ayaa labo caruur ah oo ay dhaleen uga tagay xero loogu talogalay dadka derbi jiifka ah, iyagoo aan dhar wadan wax cunto ah oo ay cunaana aan u reebin, caruurtooda ayey ka dhaqaaqeen markii ay u baahdeen nasasho gaar ah oo ay wada qaataan.
Dadka reer Ukraine ayaa waxaa lama filaan ku noqotay iney maqlaan sheekada labadan caruur ah ee la kala yiraahdo Andarey(3 sano jir ah) iyo Maksim oo(2-sano jir ah), kuwaas oo la arkay iyagoo ku jira xero dadka derbi jiifka ah loogu talogalay oo ku taalla jiidda webiga magaalada Saborisahsihiya ee gudaha Ukraine.
Dhacdadan bilowgeedii hore, Bosihiina Senitshiya oo (20-jir ah) iyo Faladamir Saytisif oo (25-jir ah), ayaa labo caruur ah oo ay dhaleen uga dhaqaaqay xero , iyagoo ka codsaday rag derbi jiif ah oo goobta ka agdhawaa iney si gaar ah ugu eegaan caruurtooda muddo 20-daqiiqa ahna ay ka maqnan doonan si ay cunto ugu soo iibsadaan, laakiin dib uguma aaney soo laaban caruurtoodii.
Labadan caruur ah ayaa waxey ku noolaayeen xero aan duur cidlo ah waxba dhaamin, iyagoo aan wadan wax dhar ah kabana warkooda haba soo qaadin, raashinkooda qashinka ayey ka dhex qaraabanayeen, halka ay biyaha ka cabbayeen webiga.
Markii ay muddo isbuuc ah ku jireen xerada, ayaa haweenay xerada soo ag-martay ay aragtay labada caruur ah oo xerada ku jirta, booliska ayey gaarsiiyeen, boolisku isla markiiba goobta ayey soo gaareen oo labadii canug ayey xeradii ka qaadeen, dhacdadana dabagal ayey ku sameeyeen. Waxey baadi goob ku sameeyay waalidiinta caruurtan, dhashay, waa la soo helay, kadib waxey ku andacoodeen iney nasasho u baahdeen, waa sida ay sheegayaan warbaahinta gudaha Ukraine.
Booliska ayaa baaritaan ku bilaabay labadan waalid, maadama ay ku fashilmeen iney waajibaadkooda waalidnimo gutaan, waxaa la filayaa iney waajahaan xukun 5-sano oo xabsi ah, halka xafiiska adeegyada bulshada uu sidoo kale ku soo oogay dacwad ka dhan ah labadan waalid, maadama ay caruurtooda ka xarimeen iney helaan xuquuqdii waalidnimo eel agama maarmaanka u ahayd noloshooda.
Labadii canug ayaa la geeyay xarunta agoonta lagu xanaaneeyo inta ay maxkamaddu go’aan ka gaareyso xaalkooda.
Previous articleMaxaa ka jira in gudoomiyaha degmada Garbahaarey lagu xayiray Muqdisho?
Next articleTaliska ciidamada Maraykanka ee Afrika oo ka hadley Weerarkii Lagu Qaadey saldhiggooda Ballidogle